Ụzọ 6 iji rụọ ọrụ na ndị na-emetụta ya na-enweghị nkwado | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ahịa influencer bụ naanị maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ, ọ nwere ike iju gị anya ịmara na ọ na-achọkarị mmefu ego. Ọtụtụ ụdị ejirila ọsụ ụzọ azụmaahịa influencer dị ka isi ihe na-akpata ihe ịga nke ọma e-azụmahịa ha, ụfọdụ emeela nke a na efu efu. Ndị na-emetụta ya nwere ikike dị ukwuu iji melite akara ụlọ ọrụ, ntụkwasị obi, mkpuchi mgbasa ozi, mgbasa ozi ọha na eze na-eso, nleta webụsaịtị, na ire ahịa. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere ugbu a nnukwu akaụntụ na Youtube (chee Ndị egwuregwu Youtube ewu ewu dị ka PewDiePie onye nwere ndị debanyere aha 111M dị ịtụnanya) ma ọ bụ ọtụtụ akaụntụ niche na ụlọ ọrụ dị iche iche (ihe atụ nke ndị ọrịa na ndị dọkịta na-arụ ọrụ).
Na influencer marketing amụma na-aga n'ihu na-eto eto na 12.2% ruo $4.15 ijeri na 2022, obere ụdị nwere ike imekọ ihe ọnụ na ndị na-eme ihe iji nyere aka ịzụ ahịa ngwaahịa na ọrụ ha, ha nwere ike ime nke a na obere ego ọ bụla. Nke a bụ ụzọ 6 ụdị nwere ike isi rụọ ọrụ na ndị na-eme ihe na-enweghị nkwado:
1. Influencer Product ma ọ bụ Ọrụ Onyinye
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe nke ụdị nwere ike iji soro ndị na-eme ihe na-arụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ maka posts ha bụ site na onyinye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ha nwere ike iji ngwa ahịa ha wee nye ndị na-eme ihe mgbanwe ebe onye na-eme ihe na-enye ụfọdụ mkpuchi mgbasa ozi ọha. Ndụmọdụ pro bụ ịgakwuru ndị na-eme ihe mgbe niile site n'ịtụ aka na ị ga-achọ inye onyinye na-akọwapụtaghị kpọmkwem paramita mgbanwe. N'ụzọ dị otú a, ọtụtụ ndị na-eme ihe ike nwere ike ịza arịrịọ gị n'ihi na ọ naghị adị ha ka ha "na-akwali" ịzaghachi na-enweghị ihe ọ bụla. enweghị ihe ahia. Azụmahịa na-enweghị isi na-eme mgbe mgbasa ozi Instagram nke ihe mmetụta na-efu karịa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'onwe ya.
Akara ahụ kwesịrị ịdị na-amata mgbe niile na ndị na-eme ihe na-enweta ọtụtụ narị na mgbe ụfọdụ ọbụna narị narị ụdị ika kwa ụbọchị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị na-eme ihe ike. N'ihi nke a, inwekwu enyi na obi iru ala banyere usoro nke imekọ ihe ọnụ ga-ekwe ka ika ahụ gosi mmetụta na ha nwere mmasị karịa ngwa ngwa "mkpọ mkpu" kama na-achọ mmekorita ogologo oge.
Berina Karic, ọkachamara n'ịzụ ahịa influencer na Ụlọ ọrụ mgbasa ozi kacha emetụta, na-atụkwa aro ka iji nkwanye ùgwù sochie ya ozugbo enwetara ihe ndị ahụ. Ndụmọdụ ya bụ ịlele onye na-eme ihe iji jụọ ha ma ha natara ma nwee mmasị na onyinye ha, yana ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbanwe ihe ọ bụla. Ụdị mmekọrịta enyi na enyi a nwere ike ị nweta isi ihe dị ukwuu ma mee ka akara ahụ pụta ìhè.
2. Njem mmetụta
Akara nwere ike hazie njem ma nabata ọtụtụ ndị na-eme ihe ma nata okpukpu iri nke mkpuchi maka ọnụ ahịa njem, nri na ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, ika nwere ike ịnabata ndị na-eme ihe ise ka ha gaa n'otu ebe wee jiri oge a dị ka ohere ịmepụta ọdịnaya maka ngwaahịa yana bipụta ọtụtụ posts na-enyocha ihe ma ọ bụ ọrụ. A na-eji atụmatụ PR a nke ọtụtụ ụdị okomoko ebe ha nwere ndị isi na-eme ihe na-emepụta ọtụtụ posts na-akwalite ika ahụ maka ohere ịga njem na iso ndị na-emepụta mmetụta ndị ọzọ na-akpakọrịta. Njem ndị na-emetụta mmetụta na-enyekwa ike maka ika ịmepụta njikọ chiri anya na ndị na-emepụta ihe na-enye ohere iji gbanwee ụfọdụ ndị na-eme ihe nkiri kachasị mma n'ime ndị nnọchianya ika maka mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ọzọ.
Atụmatụ a bụ sụrụ ụzọ site na ụdị mbụ mmekọrịta dịka Revolve, Ebe ha ga-anabata ọtụtụ ndị na-eme ihe n'elu ka ha gaa ebe dị egwu maka mgbanwe 10-15 na ntinye ndepụta na ọtụtụ vidiyo akụkọ kwa ụbọchị mgbe ị na-akpado akara ahụ.
3. Ihe omume mmetụta
Maka ụdị ndị ahụ na-enweghị ike ịhazi njem, ihe omume influencer nwere ike weta ụdị mmekọrịta a na-ejikwa nke ọma ebe ndị na-eme ihe nwere ike biputere ọtụtụ ọdịnaya maka mgbanwe maka ịga mmemme ahụ. Otu ika nwere ike hazie ihe omume n'ọfịs ha, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ma ọ bụ oghere ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma nye nkata onyinye maka ndị na-eme ihe iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'onwe ha. Ndị otu ime ahụ nwekwara ike izute influencers ihu na ihu ma kọwaa uru ngwaahịa ahụ ozugbo ebe ndị na-eme ihe na-enye ohere ịse foto ma ọ bụ ịse ihe ngosi nke ika ahụ. A pro-ndụmọdụ bụ inye a pụrụ iche na Instagrammbụ mwube ebe ndị na-eme ihe nwere ike ịse foto n'okpuru akara ngosi ihe eji achọ mma ma ọ bụ kesaa ntọala tebụl mara mma na akwa akwa ma ọ bụ mkpado nke ahaziri onwe ha.
4. Mmekọrịta Brand Onye Mmekọ
Ụdị nwere ike kewaa ọnụ ahịa nnabata mmemme ma ọ bụ njem mmetụta site na ịgakwuru ụdị ndị ọzọ yana ịkekọrịta ohere mkpọsa mmetụta ha. Ọtụtụ ụdị ndị na-abụghị ndị asọmpi na-emeghe nke ọma maka ụdị mmekọ a ka ha na-enweta uru zuru oke nke mmekorita maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke ọnụ ahịa ebe ha na-agaghị enwe ike ịtachi obi zuru oke nke ijikwa nnukwu mgbasa ozi mmetụta. Ha nwere ike isonye site n'itinye ngwaahịa ha na nkata onyinye ma ọ bụ site n'inye ohere, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, njem, ma ọ bụ ụdị ọrụ ndị ọzọ dabere na ụlọ ọrụ ha na-ahụ maka ya. Ụdị nwere ike ịga ebe dị anya ka ọtụtụ ndị mmekọ sonye ma mepụta ahụmịhe pụrụ iche. nke na-enye oke mkpuchi maka ndị niile metụtara ya.
5. Influencer Product Biri
Maka ụdị ndị ahụ na-enweghị ike ịnye ihe onyinye, karịsịa mgbe ihe dị oke ọnụ ma ọ bụ nke dị n'ụdị, ha nwere ike ịtụ aro ụdị ịgbazinye ego. Ụdị mmekọrịta a ga-agụnye onye na-emepụta ihe na-emepụta ọdịnaya site na iji ihe, na-eweghachi ya mgbe agbachara ihe nkiri ahụ, wee kesaa ihe ahụ na ọwa mmekọrịta ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ PR kacha elu na-eji atụmatụ a maka ịse foto ebe ha na-agbazinye ndị otu nchịkọta akụkọ na mgbasa ozi kacha elu naanị ịrịọ ka ezighachi ihe ndị ahụ ozugbo ọ mechara ihe ịse ahụ. Nke a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe onye na-eme ihe na-achọ ihe nkwado ma ọ bụ iberibe pụrụ iche ịgụnye dịka akụkụ nke ọdịnaya ọhụrụ ha.
6. Mmekọrịta mgbasa ozi mmetụta mmetụta
Ọ bụrụ na ika enweghị ike inye onyinye ma ọ bụ ọbụna gbazinye ihe, ha na ndị na-eme ihe nwere ike imekọ ihe site na mmekorita mgbasa ozi ibe. Nke a gụnyere ika na-echekwa mkpuchi mgbasa ozi site na mwepụta akụkọ, ajụjụ ọnụ, ma ọ bụ ụdị nkwupụta ọzọ, wee tinye onye na-eme ihe na akụkọ ha dị ka akụkụ nke obe nkwado mgbalị. Ụdị nwere ike kparịta usoro nke mmekorita tupu oge eruo, wee mee ka ndị na-emetụta ya kesaa akụkọ mgbasa ozi na mmekọrịta ha mgbe ha na-akpado akara ahụ.
N'agbanyeghị nha nke ika ahụ, ịrụ ọrụ na ndị na-eme ihe nwere ike igosi na ọ bụ ụzọ dị irè iji kpọsaa azụmahịa ma melite akara ngosi, ahịa, mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na-esote. Ụdị nwere ike iji atụmatụ imepụta ihe iji hụ na mmekọ emeri emeri na-emebighị ụlọ akụ. Site n'inyocha ụdị mgbanwe dị iche iche nke influencer, ụlọ ọrụ nwere ike ikpebi usoro kachasị dị irè wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ ahịa ha na gburugburu mmekọrịta mmeri.
Tags: berina karicmmetụta mmetụtaihe omume mmetụtaahịa ahịaụlọ ọrụ na -ere ahịa influencermmetụta mgbasa ozi mmekọrịtaagbaziri ngwaahịa influencerinfluencer ngwaahịa onyinyeInfluencer ọrụ onyinyenjem mmetụtammekorita ika mmekọonyinye ọrụahia na-ekwekọghị ekwekọ